Accueil > Gazetin'ny nosy > Toe-draharaha politika: Miditra anaty krizy vaovao i Madagasikara
Toe-draharaha politika: Miditra anaty krizy vaovao i Madagasikara
Toe-javatra efa nampoizina ary efa nohantitranteran’ireo mpandalina sy mpamakafaka ny raharaham-pirenena ny tsy maintsy hitrangan’ny krizy politika vaovao eto Madagasikara, amin’ity taona 2018 ity izay hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Raha mandritra ny fifidianana na aorian’izany no novinavinaina fa tsy maintsy hisehoan’ny korontana dia mety ho diso kajy ihany ny rehetra satria efa mitatao amin’ny firenena malagasy izao ny krizy politika vaovao, 7 volana mialohan’ny fotoana tokony hanaovana ny fiodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy mila manana mari-pahaizana na diplaoma avy eny amin’ny oniversite fa na mpianatra vao avy nanàla ny fanadinana BEPC aza dia mahita ankehitriny fa manomboka miha mafana ny toe-draharaha politika eto amintsika, indrindra fa tao aorian’ny nankatoavan’ireo solombavam-bahoaka notambazana vola 50 tapitrisa ariary an’ilay lalàm-pifidianana vaovao novolavolain’ny fitondrana HVM. Raha ny zava-nitranga tao anatin’ny tapa-bolana monja sy ny zavatra izay mbola hiseho ao amin’ity herinandro vaovao ity, dia tsy ho ela intsony fa mety ho afaka herinandro vitsy ihany dia ho tafiditra tanteraka ao anaty korontana i Madagasikara. Ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ny fitondrana avy amin’ny antoko TIM sy MAPAR dia nanamafy raha nivahiny tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina fa hanohatra hatramin’ny farany ny lalàm-pifidianana lany teny anivon’ny parlemanta na inon-kidona na inon-kitranga. Ireto farany izay nilaza ihany koa fa hamory ny vahoakan’Antananarivo etsy amin’ny tokontanin’ny lapan’ny tanàna etsy Analakely, ny sabotsy 21 aprily ho avy izao. Na efa nanome alàlana izany famoriam-bahoaka izany aza ny ben’ny tanàna eto Antananarivo-Renivohitra dia azo antoka zato isan-jato fa tsy maintsy handràra ny hetsika ny eo anivon’ny prefektiora. Tahaka ny mahazatra sy ny fahita tao anatin’izao fitondran-dRajaonarimampianina izao, tsy maintsy hampihorohoro ireo rehetra mikàsa ny hanao fihetsiketsehana ihany koa ny mpitandro ny filaminana avy amin’ny Emmo-Reg na ny OMC (Organe mixte de conception). Raha hiziriziry amin’ny heviny ka tsy hihemotra ireo depiote TIM sy MAPAR dia ahiana ny mety hisian’ny fifandonana, amin’io andron’ny sabotsy 21 aprily io. Toe-javatra izay fantatry ny rehetra fa tsy hitondra fitoniana na oviana na oviana fa vaomaika hampiakatra ny mari-pana eo amin’ny tontolo politika ary hampiditra an’i Madagasikara ao anatina krizy vaovao. Fa etsy ankilany, mirazotra amin’izany trangan-javatra rehetra izany koa ny fihetsiky ny fitondrana HVM izay hita mibaribary fa mametraka jadona eto amin’ny firenena, ary manitsakitsaka ny zo fototry ny olom-pirenena izay arovan’ny lalàmpanorenana. Ohatra akaiky azo raisina amin’izany ny fanakanana ny filohan’ny tetezamita teo aloha tsy ho an’ny Mahajanga, tamin’ny faraparan’ny volana martsa lasa teo. Ambenana amin’ny basy tsy hanao fihetsiketsehana sy tsy hanao famoriam-bahoaka daholo ny antoko politika, ny sendika sy ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena tsy mitovy hevitra na manohana ny fitondrana mijoro ankehitriny, eny fa hatramin’ireo depiote maniry ny hanao tatitra amin’ireo vahoaka nifidy azy. Mihevitra angamba ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny mpiara-dia azy fa ny fametrahana fitondrana jadona tahaka izao no hitondra filaminana eto amin’ny firenena ary hampitombo ny fitiavan’ny vahoaka azy. Tsy sasatry ny miantso fitoniana amin’ny Malagasy ny mpitondra ankehitriny , etsy andanin’izay anefa tsy misy fitsaharana ny vely kibay sy ny antsojay isan-karazany atao amin’ireo kandida ho filoham-pirenena heverina fa matanjaka sy mpifanandrina mivantana amin’ny kandidan’ny antoko HVM. Tsy hiadian-kevitra fa raha miditra amin’izany krizy politika vaovao izany ity Madagasikara ity dia ireo mpitondra fanjakana ankehitriny no tompon’andraikitra voalohany ary ho tsarain’ny tantara na ho ela na ho haingana.
Ambatondrazaka: Nanolana zaza 5 taona ny havan’ny depiote Aureline
Tao anatin’ny herinandro teo izay no miteraka resabe any Ambatondrazaka ny trangam-piarahamonina iray niseho tao amin’ny kaominina Manakambahiny, 15 km tsy hidirana ny tanànan’Ambatondrazaka. Ankizilahy vao 14 taona no tratra ambodiomby nanolana zazavavy kely 5 taona, tamin’ny alatsinainy 9 aprily lasa teo. Ny loharanom-baovao avy an-toerana moa no nahafantarana fa anadahin’ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatondrazaka, Aureline Andriamasimana, no rain’ity ankizilahy nanolana zaza ity. Mazava ho azy fa tsy nanaiky izao fanolanana nahazo ny zanak’izy ireo izao ny ray aman-drenin’ilay zazavavy ka nametraka ny fitoriana teo anivon’ny zandary any an-toerana. Teo aloha dia efa nisedra olana sahady ireto niharan-doza ireto satria tsy nety nanome ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana (certificat médical), izay manamarina fa tena voaolana tokoa ilay zazavavy kely, ireo mpitsabo miasa ao amin’ny CSB II ao Manakambahiny rehefa nahafantatra fa havan’ny depiote Aureline Andriamasimana ilay nahavan-doza. Voatery nentina tany Ambatondrazaka ilay zaza ka ny CSB II tao an-toerana no nanome ny “certificate medical”, taratasy izay tsy maintsy hananana rehefa mametraka ny fitoriana eny amin’ny mpitandro filaminana. Tsara ny manamarika fa vao nentina notsaboina tao amin’ny CSB II tao Manakambahiny ity zaza voaolana ity dia efa nihezaka nandamina ny raharaha ka nitady marimaritra iraisana ny fianakavian’i ramatoa depiote. Raha ny fantatra dia nilaza ho vonona ny hiantoka ny fiainan’ity zazavavy kely ity mandritra ny 20 taona ny fianakavian’ny depiote ka vola 5 tapitrisa ariary no omen’izy ireo. Tsy nanaiky izany anefa ny ray aman-drenin’ilay zaza voaolana ka nametraka ny fitoriana teny amin’ny zandary, ny alakamisy lasa teo. Ny zava-nisy anefa hatramin’ny nametrahana ny fitoriana dia mahatsapa ireo mpitory fa misy ny tsindry mahazo ireo zandary mandray an-tanana avy amin’ny fianakavian’ny depiote. Tadiavina ho afaka madiodio amin’ity raharaha ity mantsy ilay ankizilahy nanolana ary raha ny voalaza dia miditra an-tsehatra ihany koa i ramatoa Aureline Andriamasimana. Ity solombavam-bahoaka ity izay efa malaza ratsy amin’ny fahaizana manala manam-pahefana na tompon’andraiki-panjakana iray amin’ny toerany, any amin’iny distrikan’Ambatondrazaka iny. I Aureline Andriamasimana izay marihana ihany fa anisan’ireo depiote manohana ny fitondrana mijoro ankehitriny ary nandany ilay lalàm-pifidianana mietraka resabe eto amin’ny firenena, amin’izao fotoana izao.